Posted by ညီလင်းသစ် au 1.5.11
ကိုကြီးကျောက် တမလွန်မှာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ..
ခုတော့လည်း လက်ခံလိုက်ရပြီလေ....။ကိုကြီး ကောင်သောဘုံဘဝရောက်ပါစေဗျာ...။
ကိုကြီးကျောက် ကောင်းရာဘုံဘ၀မှာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ
အားလုံးနဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းမိပါတယ် သူ့ဟာသတွေ
စွတ်တဲ့ စာကိုသာ ကျမတို့ဖတ်ပြီး ပြုံးရယ်နေတာလေ
ကျမတို့မမြင်တွေ့ မသိခဲ့ကြဘူး။ တနေ့တော့ အားလုံး
သွားရမယ့် လမ်းဖြစ်ပေမဲ့ အရမ်းစောလွန်းတော့
He greeted me"little sis by the big lake".....:(
He spent his last few months very well. I am sure he is in happier place without pain.I couldn't believe it either.
ကိုကြီးကျောက်ခေါ် အန်ကယ်နိုင် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။ ရောက်ရာ ဘုံဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀ကို ရရှိပါစေ။
I could not believe he really is gone. The thought of he is not gonna be around us struck me pink the whole night, may he RIP!!!
ဒီနေ့မှ ဘလော့တွေကြည့်ဖြစ်ပြီး ဒီကိုပထမဆုံးလာတာ။
အားလုံးကို ပျော်စေတဲ့ ဘကျောက် ကောင်းရာသုဂတိ အမှာ အပျော်အတိလွှမ်းပါစေ
ကိုကြိးကျောက် ကောင်းရာသုဂတိ လားပါလို့ ဆုတောင်းလျှက်...
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လတုန်းကဘဲ ရန်ကုန်က လူကြုံကောင်းတာနဲ့ အကိုကြီးကို ဘာစားချင်လဲ မှာပေးပါ့မယ် ဆိုတော့ ပထမသူ အားနာလို့ မပြောဘူး ကျမက နောက်ထပ်ပြောတော့မှ ဒီမှာက လက်ဖက်တွေက အကြာ်တွေနဲ့ နောက်ပြီး ဟိုရောဒီရော ဆီနယ်ပြီးသားတွေနဲ့ညီမရယ် အဲဒါ လက်ဖက်အသားကြီးဘဲကို ဆီလေးထည့်ပြီး စားချင်လို့ လိုချင်တယ်ပြောလို့ ကျမလည်း လက်ဖက်သားတထုပ်နဲ့ ငါးရံ့ခြောက်နဲ့ တခြားသင့်မယ်ထင်တာလေး နည်းနည်းပို့ပေးလိုက်သေးတယ် .. အကိုကြီး ရွှေကြက်ပဲကြီးလှော်လေး ယူဦးမလားမေးတော့ ကိုယ့်အနံ့တောင် ကိုယ်မခံနိုင်ဘူးလို့ ပြန်ပြောလို့ ကျမမှာ ပြုံးရယ် နေရသေးတယ် ... နောက်ခဏကြာတော့ ကောင်းနေပြီးဆိုပြီး ( ကိုယ့်မှာ ၀မ်းတွေသာလို့ ) ခုလိုကြားရတော့တာဘဲ ညီလင်းရေ ... ။ နောက်ပိုင်း သူများဆီကွန်မန့်တွေ ရေးတဲ့အခါ နာမည်အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ရေးခဲ့တာလေးတွေလည်း ဖတ်ရတဲ့သူတွေကို မပြုံးဘဲမနေနိုင်အောင် ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင် စိတ်ကူးကောင်း အရေးကောင်း ခဲ့သူပါ .. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့ ရင်ထဲမှာ ကိုကြီးကျောက် အမြဲရှိနေမယ်ဆိုတာတော့ အကြွင်းမဲ့ဘဲ ကိုကြီးကျောက်တယောက် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ ...။
ကိုကြီးကျောက်စာတွေ ဖတ်ခွင့်မရနိုင်တော့တာဟာလည်း ဆုံးရှုံးမှု တစ်ခုပါဘဲ
ရောက်ရာဘုံဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ ကိုကြီးကျောက်အတွက် ဆုတောင်းမိပါတယ်ကိုညီလင်းသစ်ရေ
ရော် ရွက်ကိုခြွေ နွေတဲ့ လား